Home Wararka Midowga Europe oo shaaciyay in ay sii wadi doonaan tababarida CXD, maxaasa...
Midowga Europe oo shaaciyay in ay sii wadi doonaan tababarida CXD, maxaasa ka faa’iidnay?
Hadal-qoraal oo ka soo baxay EU-da ayaa lagu sheegay in Hawlgalka lagu tababarayo Ciiddanka DFS sii socon doono ilaa bisha December 31-da ee sanadka 2020-ka.
Waxaa kaloo Hawlgalka Tababarka EU-da ee ciiddanka DFS oo loo yaqaano EU Millitary Training Mission (EUMT in Somalia) loo ansixiyey miisaaniyad dhan € 22.9 million oo EURO, taasi oo ah kharajka ay ku hawl-geli doonaan laga bilaabo 1-da bisha Janaayo ee sanadka 2019-ka ilaa 31-ka bisha December ee sanadka 2020-ka.
Dhinaca kale, in ka badan 200 Tababarayaal Milliteri oo ka kala socda dalalka Midowga Europe ayaa xilligan ka hawl-gala gudaha Somalia, kuwaasi oo Tababara Ciiddanka DFS.
Hawlgalka EUTM waxay Tababarkaasi bixin jireen tan iyo sanadkii 2010-kii, iyagoo tababaray Kumanaan ka tirsan Ciiddanka Dowladda.
Hasa yeeshee waxaa nasiib weyn ah in markasta la sheego in Ciidan loo tababaray Somaliya, shabaabna ay kaabiga u saaran yihiin inay la wareegaan Caasimadda oo ay uga hawlgalaan si aan qarsooneyn. Hogaan xumada dawladda ayaa ah mid aan lahayn qorsho iyo istaratejiyad ay ku shaqeyso ee ku aadan dhinacyada amaanka iyo difaaca.
Hubaal waxaa ah in tababar kasta oo askaragiga la siiyaa inaysan soo kordhineyn wax horumar ah haddii uusan qorsho amni oo salka ku haya siyaaad mug leh oo ay madaxda dalka dejisay uusan jirin.
Qorshaha Noocaas ahna waxaa uu u baahan yahay dawlad fadhida oo fekeri karta, hasa yeehsee uma baahna dawlad burburin iyo been ku nool ah sida hadda dalka ka jirtaa.
Previous articleYaa ka danbeeyay in qunsulkii Dowladda Itoobiya u fadhiyay Somaliland looga yeero Adis Ababa maxayna tahay sababta?
Next articleXildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka badbaaday Qarax Gaarigiisa loogu xiray
Dood kulul oo leysku dhaafsaday Baarlabaanka iyo qiil loo la’ayahay (Daawo)
Iraan oo dil ugu hanjabtay Donald Trump